डा. गोविन्द केसीका समर्थकलाई दमक प्रहरीको अवरोध (भिडियाे सहित) | Hamro Biratnagar
गृह पेज अन्य डा. गोविन्द केसीका समर्थकलाई दमक प्रहरीको अवरोध (भिडियाे सहित)
डा. गोविन्द केसीका समर्थकलाई दमक प्रहरीको अवरोध (भिडियाे सहित)
झापाकाे दमक प्रहरीलेमा शुक्रबार २० दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा स्वतन्त्र रुपमा निस्किएका युवाहरूमाथि दमन गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको माफियाको अन्त्य र कर्णाली प्रदेशमा एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्नुपर्ने माग सहित डा. केसी अनशनमा रहेका छन् । अनशनमा बसेका डा. केसीको समर्थनमा निस्किएको स्वतन्त्र युवाको जमातलाई प्रहरीले रोक लगाएको छ ।
"स्वतन्त्र रुपमा डा. केसीको समर्थनमा निस्किएको युवाहरुलाई प्रहरीले अवरोध गरेको छ" प्रदर्शनमा संलग्न युवा दिपक खरेलले भने, " प्रहरी सरकारको कठपुतली रहेछ । सरकारको समर्थनमा प्रदर्शन गरे साथ दिन्छ, विरोध गरे अवरोध गर्छ।"
सरकारले तत्काल २० दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने खरेलले बताएका छन् । उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निस्किएकामाथि प्रहरीले दमन र पक्राउ गर्नुबाट सरकार सत्याग्रहीसँग कति डराएको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा पनि सरकारको हेल्चेक्राई प्रवृत्तिको विरोधका लागि पनि अाज बेलुका ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म प्रदर्शन जारी रहने बताइएको छ ।
अघिल्लो समाचारविपिमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु, संक्रमितमा कुनै लक्षण थिएन
अर्को समाचारनेकपाको आजको सचिवालय बैठक स्थगित